‘तिलोत्तमामा यसकारण लगानी सम्मेलन’–नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेससंगको कुराकानी - Nepalgunj Business
बासुदेव घिमिरे, नगर प्रमुख तिलोत्तमा नगरपालिका
तिलोत्तमा तीव्र सहरीकरण भैरहेको रुपन्देहीको मध्यभागमा अवस्थित २०७१ सालमा स्थापना भएको नयाँ नगरपालिका हो । जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नगरको पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक–पूर्वाधार, फोहरमैला व्यवस्थापन, हरियाली पवद्र्धन जस्ता नागरिकका अपेक्षालाई नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ । फरक अभ्यास, नयाँ कार्यको थालनीले यो नगरपालिका मुलुकमैं चर्चामा छ ।
मुलुकमैं पहिलो पटक स्थानीय कानुन निर्माण, सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा, छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, बिरामीलाई चाहिने रगतको सेवा भुक्तानी, पशु बीमा अनुदान, सिटी फ्लावर र कलर कोड निर्धारण, जन्मदिनमा वृक्षारोपण गर्न नगरबासीलाई आह्वान, सार्वजनिक कार्यक्रम तोकिएकैं समयमा सुरु गर्नुपर्ने, सार्वजनिक कार्यक्रममा विदेशी फूल तथा खादा–ब्याज निषेध र प्लाष्टिक झोलामुक्त नगर घोषणालगायतका कार्यक्रम अघि बढाएको तिलोत्तमाले आउँदो असोज ९ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । प्रस्तुत छ–लगानी सम्मेलनमा केन्द्रीत रहेर नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तिलोत्तमाले असोज ९ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यो लगानी सम्मेलनको औचित्य के हो ?
लगानी सम्मेलनको प्रसंग अघि म तिलोत्तमा नगरपालिकाकैं बारेमा बताउन चाहान्छु । तिलोत्तमा नगरपालिका २०७१ सालमा स्थापित नयाँ नगरपालिका हो । २०७१ सालमा साविकका सात वटा गाविस मिलेर बनेको तिलोत्तमा नगरपालिका तीव्र शहरीकरण भैरहेको क्षेत्र हो । यहाँ दिनहुँ नयाँ उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, होटल, रिसोर्ट खुल्ने क्रम पनि तीव्र छ । रुपन्देहीकैं मध्यभागको अवस्थिति, बीचबाट सिक्सलेन र बौद्ध परिक्रमा पथ, भारतीय सीमा र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नजिक, पर्याप्त खुला क्षेत्र, सडक, विद्युत्, पानीको पर्याप्तता जस्ता कारणले यहाँ लगानी तीव्रतर बढिरहेको छ ।
हामीले तिलोत्तमालाई समृद्ध नगरको रुपमा विकास गर्न अपल्कालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेका छौं । स्थानीय, संघीय र प्रदेश सरकारबाट कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् । तर, पनि बजेट सीमितताको कारण अपेक्षित कामहरु एकै पटक गर्न नसकिने यथार्थतालाई मनन गरेर आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई अझ व्यापक बनाउने उद्देश्यले असोज ९ गते तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेका हौं ।
तिलोत्तमामा कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधारलगायत तमाम क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्राउनु नै यस सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य हो । तिलोत्तमा आफैंमा अपार संभावना बोकेको भर्जिन सिटी भएकाले यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्थाहरुको लगानी भित्राउन सकिन्छ भन्ने हामीहरुको विश्वास छ । हामीहरु लगानीकर्तालाई यहाँ लगानी गर्दा अत्यन्त सुरक्षित छ भन्नेमा विश्वस्त पार्न चाहान्छौं ।
तयारी कसरी गर्नुभएको छ ? कहाँसम्म पुग्यो तयारी ?
आजको दिनसम्म तयारीको ७० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, विकास साझेदारहरुलाई पत्राचार गर्ने काम अहिले तीव्रताको साथ अघि बढेको छ । सम्माननीय पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ̔प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गर्नुहुने सम्मेलनमा संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, सरकारका उच्चपदस्थ प्रतिनिधि, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाली निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता समेत गरी ५ सय जनाको सहभागिता रहने हामीहरुको अनुमान छ । हामीहरु यहीँ अपेक्षासहित तयारीमा जुटेका छौं । तयारीका सन्दर्भमा मेरो नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति र विभिन्न उप–समितिहरु गठन गरिएको छ । सम्मेलनका लागि तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ, तिलोत्तमा च्याम्बर अफ कमर्श, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संगठनसँग मुख्य सहकार्य गरिएको छ भने जिल्ला स्थित अन्य सबै उद्योग, व्यापार, पर्यटन सम्बद्ध संघ–संस्थाबाट सहयोग लिइएको छ । सरोकारवालाहरु पटक–पटक छलफल गरिएको छ ।
तयारीको काम अघि बढाइरहँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
लगानी सम्मेलनलाई सबैले सकारात्मक रुपमैं लिएको पाएका छौं । तपाईंलाई भनि हालौं की ः हामीले लगानी सम्मेलन गर्ने थाहा पाएपछि कयौंले हामीहरुलाई फोन गरेर बुझ्ने गर्नुभएको छ भने कतिपय व्यवसायीहरु नगरपालिकामैं आएर सम्मेलनको उद्देश्यको बारेमा बुझ्नु भएको छ । अरु ठाउँमा उद्योग लगाएकाहरु पनि रुपन्देही तिलोत्तमामा सार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेको मैले पाएको छु । सानादेखि ठूला लगानीकर्ताहरुले लगानी सम्मेलनलाई बडो रुची दिएको मैले पाएको छु ।
संघीय सरकारले काठमाडौंमा गरेको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएअनुसार लगानी नआएकोले सफल मानिएको छैन, तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन सफल हुने आधारहरु के छन् ?
संघीय सरकारले पूर्णतः वैदेशिक लगानी भित्राउने हिसाबले लगानी सम्मेलन गरेको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । तर हामीहरुको सन्दर्भमा उस्तै प्रकृतिको भए पनि हामीले सकेसम्म स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नै प्राथमिकता दिएका छौं । परियोजना छनौट गर्दा पनि हामीहरुले नगरपालिकाले आफैले गर्नुपर्ने कामको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएका छौं । यसर्थ पनि हामीहरु यो सम्मेलनमा सफल हुनेछौं । अर्को कुरा लगानी सम्मेलनमा तत्काल लगानी भित्रिने एउटा पक्ष होला, अर्को पक्ष भनेको यहाँ लगानीको वातावरण छ है भन्ने जानकारी लगानीकर्तालाई दिनु पनि हो । यसो हुँदा लगानीकर्ता आफूलाई अनुकुल हुँदाको अवस्था वा लगानी बढाउँदा हाम्रो क्षेत्र रोज्न सक्ने आधार पनि तय हुन्छ । यसर्थ लगानी सम्मेलनको तात्कालीन र दीर्घकालीन दुवै महत्व रहन्छ ।
त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो सम्मेलनले यहाँको निजी क्षेत्र र नेपाल तथा अन्य मुलुकका निजी क्षेत्रबीच राम्रो नेटवर्किङ विकास गराउनेछ । यो सम्मेलन सरकार, स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रबीच नेटवर्किङ स्थापित गर्ने एउटा सुनौलो अवसर हो । त्यसले यो सम्मेलन मूलतः लगानीसँग सम्बन्धित सबै पक्षको भेटघाट तथा नेटवर्किङको साझा थलो पनि हिसाबले पनि सफल हुनेछ ।
तिलोत्तमामा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले के लाभ पाउंछन् ? लगानीकर्तालाई के सहुलियत र सुविधा दिंदै हुनुहुन्छ ?
लगानी सम्मेलनमा सम्झौता हुने परियोजनाका लागि कर छुट, जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयलाई हामीले समेटेका छौं । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त नगरपालिकामा अत्यावश्यक परियोजना कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । परियोजनासम्म जाने र आउने बाटोको पहँुच सुविधा नगरपालिकाबाट हुने छ । न्यूनतम ५० जना सम्मलाई रोजगारी दिने परियोजनालाई स्थापनाको ५ वर्ष सम्म व्यवसायिक करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । न्यूनतम ३०० जना सम्मलाई रोजगारी दिने परियोजनालाई स्थापनाको १० वर्ष सम्म व्यावसायिक करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । ३०० जना भन्दा माथि ५०० जना सम्मलाई रोजगारी दिने परियोजनालाई स्थापनाको १२ वर्ष सम्म व्यावसायिक करमा ९० प्रतिशत छुट दिइनेछ । ५०० जना भन्दा माथि रोजगारी दिने परियोजनालाई स्थापनाको १५ वर्षसम्म व्यवसायिक करमा शतप्रतिशत छुट दिइने छ । यसैगरी परियोजनाको भवन, टहरा तथा संरचना निर्माणको लागि नगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्दा ५० देखि ३०० जना सम्मलाई रोजगारी दिने परियोजनालाई ५० प्रतिशत नक्सा पास दस्तुरमा छुट दिने नीति हामीले लिएका छौं । कृषिमा आधारित दुग्ध उद्योग, मत्स्यपालन, माछाभुरा उत्पादन, प्रशोधन एवं प्याकेजिङ, कोल्ड स्टोरेज, आदिलाई परियोजना स्थापनाको ७ वर्ष सम्म नगरपालिकाले लिने व्यवसायिक कर र नक्सा पास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ । तिलोत्तमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रलाई परियोजना स्थापनाको ७ वर्षसम्म नगरपालिकाले लिने व्यवसायिक करमा लाग्ने रकम तथा नक्सा पास दस्तुरमा ६० प्रतिशत छुट दिइने छ । पर्यटन तथा मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित होटल मोटेल तथा मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित परियोजनालाई स्थापनाको ५ वर्ष सम्म नगरपालिकाले लिने व्यवसायिक करमा लाग्ने रकम तथा नक्सा पास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ । न्यूनतम ५० जनालाई रोजगारी दिने परियोजनालाई ५ वर्षसम्म सम्पत्ति करमा शत प्रतिशत छुट र परियोजनाका लागि जग्गा खरिदमा सहजिकरण गरिनुका साथै विद्युत सेवाका लागि पनि सहजिकरण हुनेछ ।
लगानी सम्मेलनमा कतिवटा र कस्ता परियोजना प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ ? ती परियोजनाबारे विस्तृतमा खुलाइदिनुस् न ।
मैले यसअघि पनि भने की : हामीले २२ वटा जति परियोजना लगानी सम्मेलनमा लैजाँदै छौं । हामीले परियोजना प्रस्ताव गर्दा सो परियोजनाले वातावरण र नागरिकको दैनिक जिवनमा पार्ने प्रभावलाई समेत ध्यान दिएका छौं । सूर्तिजन्य, मदिराजन्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक पर्ने परियोजनालाई निरुत्साहित गरिएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित, स्थानीय रोजगारी, वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण, फोहरमैला ब्यवस्थापन, कृषि, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदीमा आधारित परियोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रस्तावित परियोजनामा एकीकृत कृषि उपज संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र, एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, ढाक्रेबास एकीकृत पर्यटकीय स्थल, मासु प्रशोधन केन्द्र, सिटी कलेज, प्रादेशिक बसपार्क, तिलोत्तमा अटोभिलेज, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र, रिङ रोडमा रेलवे, स्मार्ट हाटबजार, एकीकृत दुध संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र, स्मार्ट पार्किङ स्मार्ट बालउद्यानलगायत छन् ।
कति वटा परियोजनामा कति लगानी भित्रिने अपेक्षा गर्नुएको छ ?
आजको दिनसम्म हामीहरुको सम्पर्कमा आउनुभएका लगानीकर्ताहरुको कुराकानीका अनुसार लगानी सम्मेलनमा सम्मानजनक लगानी भित्रिने गरी एमओई हुन्छ भन्ने छ । मैले अघि पनि भने यो लगानी सम्मेलनको दुई वटा महत्व छ । एउटा तत्काल एमओई गरेर आउने लगानी, अर्को अप्रत्यक्ष रुपमा पछि आउने लगानी । यसर्थ हामीले लगानीलाई निरपेक्ष ढंगबाट मात्र हेर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
यस्लाई अलि प्रष्टाइदिनुहोस न ?
मैले भन्न खोजेको लगानी सम्मेलनमा कति लगानीको एमओई भन्ने कुरा मात्र सबथोक होइन भन्ने हो । जस्तो की ः कुनै लगानीकर्ता लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएर यहाँको सबै अवस्था बुझेर आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने देख्दा पछि लगानी ल्याउन पनि सक्छ । नेपाल नै नआएको विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ आएर तिलोत्तमा मात्र होइन मुलुककैं अन्य ठाउँमा पनि लगानी गर्न सक्छ । त्यसैले हामीले के भनेका छौं भने आयोजनाको हिसाबले यो सम्मेलन हामीले गरेको देखिए पनि यो सबैको साझा लगानी सम्मेलन हो । सम्मेलनबाट यहाँका लगानीका क्षेत्रको बारेमा सन्देश प्रवाह पनि हुनेछ
लगानी सम्मेलनका लागि रुपन्देहीका अन्य पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारबाट कस्तो सहयोग/सहकार्य भएको छ ?
लगानी सम्मेलनपछि भित्रिने लगानी, पूँजी, प्रविधि र ज्ञानले समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने भएकाले यो लगानी सम्मेलन हामी सबैको साझा प्रयास हो । यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, रुपन्देहीका अन्य पालिका सबैको सहयोग र सहकार्य छ । लगानी बोर्डको पनि सहयोग रहेको छ । हामीले जति परियोजनाको एमओइ गर्छौं, त्यसको कार्यान्वयनमा पनि तीन तहको सहकार्य जरुरी छ । यो एउटा सहकारिता, सहकार्य र सह–अस्तित्वको अभियानका साथै लगानी जुटाउने उत्सव भएकाले सबैसँग सहकार्य गरेका छौं । हामीहरुले रुपन्देहीका सबै पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षसँग पनि छलफल गरेर सुझाव लिएका छौं ।
फेरी पनि मैले जोड दिन चाहन्छु की–यो लगानी सम्मेलन हामीहरु सबैको हो । सम्मेलनले जति लगानी ल्याउनेछ, त्यसको फाईदा अपरोक्ष रुपमा सबै नेपालीलाई हुनेछ । लगानी सम्मेलनले यहाँ भएका लगानीका अवसरलाई नजिकबाट जान्ने तथा बुझ्ने अवसर दिनेछ । तिलोत्तमामा जति पनि सम्भाव्य परियोजनाहरू हुन्छन्, ती योजनामा लगानी गरेर कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ, लगानीको प्रशासनिक तथा कानुनी बाटो के हो, लगानी सम्बन्धी स्थानीय सरकारको दृष्टिकोण, परियोजना कार्यान्वय गरिरहँदा पर्ने व्यवहारिक समस्या हल गर्ने उपाय के हुन् भन्नेबारे सम्पूर्ण जानकारी सम्मेलनले दिनेछ । यी सबै विषयवस्तुलाई नजिकबाट चिन्ने÷चिनाउने माध्यमको रुपमा लगानी सम्मेलनलाई लिइएको छ ।
अतः लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गर्दै सहयोग पुर्याउन सबैलाई अनुरोध गर्दछु । यस्तै लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा रचनात्मक सुझावहरु दिनुहुन पनि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहान्छु । अन्त्यमा यो विषयलाई जनमानसमा पुर्याउने तपाईं र संचार संस्थालाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, भदौ २७, २०७६ 7:59:07 AM